ह्यापी फ्रेन्डसिप डे! - Blogs of Sagar Prasai
ह्यापी फ्रेन्डसिप डे!
पाँच कक्षा तिर हो क्यार! म र बिमल एकदमै मिल्थ्यौँ। दुवै मिलेर निकै उट्पट्याङ्ग काम गर्थ्यौँ। तर म हिड्न नसक्ने भएकाले र पढाईमा अलि जान्ने भएकाले सजाय चाहि उसले मात्रै पाउने गर्थ्यो। एकदिनको कुरा हो उसले खोई कताबाट हो रबरको सर्प लिएर कक्षामा आयो।
त्यो हुबहु सर्प जस्तै थियो र पुच्छरमा समाउँदा साँच्चिकैको सर्प जस्तै गरी हल्लिन्थ्यो। त्यो सर्प देखेपछि मेरो दिमागमा एउटा सैतानी आईडियो आयो।
हामीलाई पढाउने एकजना भक्त सर हुनुहुन्थ्यो। वहाँ एकदमै रमाईलो मान्छे। पढाउँदा पनि पुरै भावमा डुबेर कक्षामा पुरै अभिनय गर्दै यता र उता पुग्दै पढाउनुहुन्थ्यो। मलाई भक्त सरलाई त्यो सर्पले तर्साउन पाए कस्तो मज्जा हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। अनि मैले बिमललाई यो कुरा भने, उसले तुरुन्त मान्यो।
हामी अगाडीकै डेस्कमा बस्थ्यौँ। भक्तसरको पिरियड आउने बेलामा डेस्क भन्दा अगाडी सरले पढाउने ठाउँमा अलि बिच तिर हामीले त्यो सर्पलाई राख्यौँ। भक्तसरले सदाझै उहि उत्साहका साथ पढाउन थाल्नुभयो। घरि यता र घरी उता गर्दै अनेक भावरङ्गी रुपमा वहाँले हामी पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बिमल र म चाही कुनबेला सरले सर्पलाई टेक्नुहुन्छ भनेर पर्खिएर बसेका थियौँ।
नभन्न्दै सरले सर्पमा टेक्नुभयो, सर्प एक्कासी हल्लियो र सर -आबुई! भनेर यति माथि उफ्रिनुभयो। वहाँ यति डराउनुभयो कि एकछिन सम्म त साँच्चिकै सर्प होला भनेर पर पर हुनुभयो। सारा क्लासलाई त्यो नक्कली सर्प भनेर थाहा थियो, सबै गलल हाँसे। बिमल र म त झन् मुर्छा परेर हाँस्यौँ।
जब सरले कुरा बुझ्नुभयो, वहाँ एकदमै रिसाउनुभयो। वहाँको त्यसतो रिस मैले कहिले देख्या थिईन्। वहाँले गर्जनका साथ सबैलाई सर्प कसको हो बताउन आदेश दिनुभयो, नत्र सबले चुटाई खाने भईयो। हामी सबै पुरा डरायौँ। एकजनाले सर्प बिमलले लिएर आएको भनेर सरलाई भन्दिए।सर बिमल सँग असाध्यै रिसाउनुभयो। उसलाई उठाएर पहिला त केहि नभनि काठको रुलरले निकै चोटि पिट्नुभयो। अनि कसले यस्तो गर्न सिकायो भनेर सोध्नथाल्नु भयो। मेरो सातो गयो। आज मजाले खाने भईयो भनेर एकदमै डराए।
तर अँह बिमलले मेरो नाम भनेन। सरले जति पिट्दा पनि उसले मेरो नाम भनेन। सरको रुलरले बिमलको हातमा जति जति लाग्थ्यो, मेरो मन उति दुख्थ्यो। मैले हो सर भनेर भन्न हिम्मत पनि आएन। यसरी मलाई बचाउने हुँदा बिमलले उसले पाउनु पर्ने भन्दा एकदमै धेरै सजाय पायो। धन्न सरको रिस अलि बेलैमा शान्त भएछ क्यार, प्रिन्सिपलकोमा चाहि लानु भएन बिमललाई।
सजाय पाईसकेपछि बिमल चुप लागेर बस्यो। उ हातको दुखाईले रोईरहेको थियो, म मनको। तर हामी दुवैले अघिको हर्कत र सरको चुटाई बारे केहि कुरा गरेनौँ।
परियड सकिएपछि बिमलले मलाई भन्यो-“पिसाब फेर्न जाने हो?”मैले हुन्छ भने। अनि उसले मलाई बोकेर ट्वाईलेट तिर लिएर हिड्यो। त्यो बेला मेरो व्हिलचियर थिएन, यसरी नै बिमलले मलाई बोकेर हिड्थ्यो।
बाटोमा मैले भने-“आज के खाजा खाने?”
उसले भन्यो-“म सँग त पैसा छैन।“मैले भने-“मेरो खातामा लेख्ने नि।“
मेरो बुवाले मैले खाजा खानको लागी स्कुल नजिकैको होटलमा बाँकि खान पाउने व्यवस्था गरिदिनुभाको थ्यो।उसले भन्यो-“त्यसो भए- थुक्पा खाने।“
मैले हुन्छ भने।
पिसाब गरिसकेर, ट्युबवेलमा मुख धुनलाई उसले मलाई नजिकैको बेन्चमा राख्यो। मुख धुदै गर्दा उसले भन्यो-“सारै पिट्यो यार!”। मैले केहि भनिन।अनि उसले नै भन्यो-“तर कस्तो मजा आयो है। कस्तो माथि उफ्र्या सर त।“ अनि उ सरको एक्टिङ्ग गर्दै माथी उफ्रियो।म पनि मज्जाले हाँसे। अघि देखि मनमा थुप्रिएको बोझ हट्यो।
अनि हामी हाँस्दै कक्षा कोठमा फर्कियौँ।आज मित्रता दिवसको दिन बिमलको याद आयो। र याद आयो अन्य यस्ता साथीहरू जस्ले मेरो लाग कुटाई खाए, मसँगै फटाहि गरे, सँगै हाँसे-रोए। सबैलाई मेरो अपार माया!
मैले एकपल्ट एकजना गरुलाई सोधे- बेस्ट फ्रेन्ड भनेको खासमा कस्तो हो?
वहाँले भन्नुभयो- तिम्रो आजको साथीलाई तिमी यदि दश बर्ष पनि उस्तै मजाले सम्झन्छौ र त्यो सम्झनाले तिमीलाई खुशी बनाउँछ भने, उहि हो तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड।
मेरा सबै बेस्ट फ्रेन्डहरूमा- ह्यापी फ्रेन्डसिप डे!